6 nzira dzekudzora kurasikirwa | Ehupfumi Zvemari
6 nzira dzekudzora kurasikirwa
Imwe yemamiriro ezvinhu akaipisisa anogona kumuka ndeyekurasikirwa mune yako portfolio yekudyara. Kwete chete chichava chiitiko chisingadiwe, asi zvinogona kukukonzera iwe unoshamisa musoro. Nekuti hauzogone kutengesa zvikamu zvako uye nenjodzi yakawedzerwa yekuti zvikamu zvako zvinogona kuramba zvichiderera mumisika yemari. Kusvika kune icho chinhu icho iwe chawakasangana nacho kanopfuura kamwe munhoroondo yako sediki uye wepakati investor.
Maitiro ako ese anofanira kuve edziviriro yekudzivirira iyi isingafadzi mamiriro. Asi muzviitiko zvakawanda hauzove nesarudzo kunze kwekuvatora semhedzisiro yekushomeka kwemisika yemari pachavo. Icho chinhu chichava kunze kwekudzora kwezviitiko zvako. Iko kwaunongova nemhinduro dzinopfuura mbiri chete. Kana kutengesa zvikamu nezvakatevera vakaremara. Kana, pane zvinopesana, mirira kuti zvinhu zvikuitire zviri nani uye iwo mitengo yezvikamu zvadzokere kudzamara vasvika pamutengo wekutenga wakafanana.
Pakati pavo vese, kubva zvino zvichienda mberi iwe uchave uine akateedzana nzira dzekudyara dzinozokubatsira iwe pamwe nekukanganisa kurasikirwa uko iwe kwaunogadzira mukuita kwako mukuenzana. Iwo ari nyore kushandisa uye haazodi ruzivo rwakakosha kuti uzviite kubva zvino zvichienda mberi. Ivo ndeemhando dzakasiyana kuitira kuti iwe ugone kuendesa kunze zvichienderana neprofile iwe yaunopa sewe investor: hasha, zvine mwero, kana kuzvidzivirira. Chero zvazvingaitika, chichava chishandiso chinokupa iwe kugona kukuru muzviito zvako. Uye pamwe uine chivimbo mukuita kwako munyika yemari.
1 Unogona kudzivisa kurasikirwa pamusika wemari?
2 Chekutanga kiyi: kusiyanisa
3 Chechipiri kiyi: inoshanda manejimendi
4 Chechitatu kiyi: sanganisa akati wandei
5 Kiyi yechina: buda mumiganhu
6 Chechishanu kiyi: ganisira mipiro
7 Kiyi yechitanhatu: aiwa kune akaomesesa
Unogona kudzivisa kurasikirwa pamusika wemari?
Ehezve, zvichave zvakaoma kwazvo kuti iwe udzivise kutaridzika kwechiitiko ichi. Kwete kutaura zvisingaite. Hazvishamise kuti misika yemasheya haisi sainzi uye chero chinhu chinogona kuitika, kunyangwe kugona kurasikirwa nemamirioni mazhinji pane zvaitarisirwa mumabasa emastock ayo iwe aunoita kubva zvino zvichienda mberi. Asi hongu chaunowana kuwana kudzikamisa. Saka kuti iyo balance yeakaunti yako yekutarisa isaburitse zvinopfuura kamwechete zvinotsamwisa mumakore anotevera. Kuti uite izvi, iwe uchafanirwa chete kutevedzera mamwe emazano atinozo kufumura iwe.
Kuti uwane izvi zvinangwa zvakamirirwa kwenguva refu, haufanire kungoita yakajeka uye yakanyatsotsanangurwa nongedzo yezviito. Asi zvichave zvakare zvakafanira kuti iwe uchinje dzimwe tsika dzauinadzo muhukama hwako nemisika yemari. Nerombo rakanaka uye nekumwe kurangwa hauzove nematambudziko akawandisa Kubva ikozvino zvichienda mberi, iyo yazvino account chiyero haitambure zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kurasikirwa chikamu chakakosha kwazvo cheako ako epfuma.
Chekutanga kiyi: kusiyanisa
Unenge uri mutemo wekutanga kuchengetedza mari yako kubva pazviitiko zvisingafarirwe zvinogona kuunzwa nemabhizimusi. Iri zano rekudyara rinogona kushandiswa nekusaisa mari yako mukukosha chete. Asi mune akati wandei uye kana zvichibvira vanobva zvinhu zvakasiyana zvemari. Yakagadziriswa, inoshanduka-shanduka, imwe mari uye musinganzwisisike musika wezvemari ndiyo yakanakisa nzira yekumisikidza portfolio yako kubva panguva chaidzo idzi.
Kunyangwe kuburikidza nechigadzirwa chemari chinounganidza mipiro iyi mukudyara. Mari yekudyara iri chaiyo yezvimwe zvirevo zvinotora zvakanakisa maitiro aya. Nekuti zvirizvo, ako mapotifoliyo anogona kuve akaumbwa akasiyana emari zvinhu. Kubva pamabhondi emakambani kusvika pakutengwa kwemasheya mumisika yepakutanga yemari iwe yaunogona kuwana izvozvi. Nemhedzisiro inogutsa kwazvo kune vanhu vanoshandisa nzira idzi.
Chechipiri kiyi: inoshanda manejimendi
Hapana mubvunzo kuti chiito ichi chinokubatsira zvirinani kutakura zviwanikwa zvako. Kunyanya mumamiriro asingafadzi emisika yemari. Nechikonzero chakakosha kwazvo uye ndiko kuziva chinja mafambiro kune zvese zvingangoitika. Kubva pane zvinonyanya kubatsira iwe pachako zvido kune izvo zvinogadzirwa munguva dzezvehupfumi hupfumi. Izvo zvakare zvine mukana wakakosha wekuti mamaneja pachawo anenge achitarisira kuita shanduko idzi zvichienderana nemamiriro ezvinhu anomuka nguva dzese.
Dambudziko hombe pakuzviita nderekuti mashoma mabhengi kana zvigadzirwa zvemari zvinopa chinhu ichi. Uye zvakare ndiyo mari yekudyara vanoipa kwauri mukukosha kwayo kwese. Pasi peanoshanda manejimendi yemari yako uye izvo zvinopesana nemafambisirwo emari ekudyara. Ndedzipi idzo dzinogara dzichichengeta zvakafanana chimiro. Chero chii chinoitika uye kunyangwe matambudziko akakomba achiitika mune mamwe emisika yemari yakasarudzwa. Musiyano wakakura uyo unogona kukubatsira kubuda mumatambudziko. Kunyanya mune bearish nguva yemari.
Chechitatu kiyi: sanganisa akati wandei
Imwe yemakiyi akakosha kuitira kuti kurasikirwa kwako kusanyanya kukura kugovera mari yako mukati zvigadzirwa zvakasiyana zvemari. Kuuya kubva zvese zvakagadziriswa uye zvinoshanduka mari kana kunyangwe kusarudza imwe musika isinganzwisisike. Iko kune izvo zvezvinhu zvakasvibirira, simbi dzakakosha kana mari inogona kuve inonyanya kukurudzira kubatanidza mari yako kubva ikozvino. Mhedzisiro yacho, sezvauri kuona, inoshamisa sezvo kurasikirwa kuchaderedzwa zvakanyanya. Kunyanya zvinobudirira kupfuura iwe zvaunogona kufungidzira kubva pakutanga.
Nenzira iyi, iwe unenge wakwanisa ku sanganisa nguva yekuisa mari, manotsi ebhengi, kutenga uye kutengesa masheya, mari yekudyara kana akanyorwa mari uye kunyangwe emari yepamusoro-yekutarisa maakaundi. Semhedzisiro yechirongwa chakakosha ichi, iwe zvakare unozokwanisa kusarudza zvigadzirwa zvakaomesesa zvinogona kukupa iwe kudzoka kwakakura pane zvako zvemari zvaunopa. Kubatsira kwauinako ndewekuti iwe uchave uri mune yakanakisa mamiriro ekubatanidza chero chigadzirwa kana mari yemari.
Kiyi yechina: buda mumiganhu
Kuti udzikise kurasikirwa kwaungave uchigadzira kubva zvino zvichienda mberi, unogona zvakare kuenda kune imwe misika yepasi rose muzvikwereti Hazvishamisi kuti pane nguva dzose pane dzimwe dzinozvibata zvirinani pane vamwe uye iwe unogona kutora mukana weiyi inertia mune zvinoitika zvemitengo yavo. Ichakupa iwe margin iri nani ku dzivisa zviitiko zvisina kunaka zvakanyanya kune zvido zvemari yako yawakaisa mari. Kunyangwe iwe uchinge usina sarudzo kunze kwekutarisana nemakomisheni akawandisa ayo anokubhadharira mashandiro mumisika yequity kunze kwemiganhu yedu.
Ehe zvichakubatsira shandisa mukana wese zvebhizinesi zvinoratidzwa. Panguva ipi neipi uye munzvimbo dzakasiyana siyana. Iko hakuna miganho kune ako mashandiro sezvo iwe uchingova iwe chete unovaisa iwo kubva munzira dzako pachako kuti utungamidze nenyika yakaoma yemari. Kubva ku equities kweUnited States kusvika kune iyo yekondinendi yakare, ivo vanofanirwa kukanganwa nezveAsia kana kunyange chiLatin misika yemasheya. Zvinosanganisira njodzi huru, asi panguva imwechete iyo mubairo unenge wakakwira. Nguva dzose nechinangwa chekudzora kurasikirwa kweshoko rako remari.
Chechishanu kiyi: ganisira mipiro
Imwe nzira inoshanda yekudzivirira zvaunofarira sediki uye wepakati investor. Nekuti zvinokutendera kuderedza zvirema nenzira yakanyanyisa. Hazvishamise kuti mari iri panjodzi ichave shoma uye nekudaro uchamhanya nenjodzi shoma kupfuura mune zvimwe zviitiko zvakawandisa kubva pakuona kwemari. Nekuti mukuita, haufanire kuisa mari yose iripo, asi nechikamu chayo, zvinoenderana nezvinodiwa nehupfumi hwako. Kunyangwe nezvipo zvine mwero kwazvo kuti usazotora njodzi dzakawandisa mukufamba kwako mumusika wemasheya.
Uye zvakare, iyo inokupa iwe nenyaya yekuti iwe unogona kuve nekuwedzera kushomeka kune apo mikana yakanakisa inomuka mune chero yemari misika. Chimwe chinhu chisingagoneke, kana zvichipesana, iwe unodyara mari yako yese panguva imwechete. Kana iwe ukagovera pakati pe20% uye 60% yemari yako, ichave yakawanda kudarika kukwana kugutsa zvido zvako zvekudyara. Kusiya batch yavo kumabasa matsva mumwedzi inotevera.
Kiyi yechitanhatu: aiwa kune akaomesesa
Chekupedzisira, iwe haugone kukanganwa kuti kusavapo kubva pakutora zvinzvimbo mune zvine hukasha zvigadzirwa kuchakubatsira iwe kubata rako guru. Mazhinji acho anosanganisira njodzi dzakawandisa uye kunyanya kana iwe usina ruzivo rwakakwana rwemari kuti ushande nezvikumbiro izvi. Iko kushanduka kwakaipa kwavo kunogona kukukonzera iwe kurasikirwa akawanda maeuro zviya. Kusvika kumatanho anogona kuve nenjodzi kune zvaunofarira. Iko kungatokwanisika kuti iwe usiye chikamu chakanaka cheguta guru pakati.
Mvumo, kutengeswa kwechikwereti, zvigadzirwa uye imwe mari yekudyara zvimwe zvezvigadzirwa izvi kwaunogona kurasikirwa nemari yakawanda kupfuura zvakafanira. Kusvika pakuti iwe unofunga kuti hazvina kukodzera kuisa mari mune aya mamodheru ane hukasha maererano nemaitiro avo. Kana iwe haugone kukanganwa zvigadzirwa izvo zvakafanana neiyo chepfu uye kuti vasiya mutsetse wevakauraiwa munzira. Nemaitiro ekutonga akabatanidzwa. Icho chimwe chinhu chausingafanire kuita kana chako chikuru chishuwo chiri chekuchengetedza yako mari chero zvodii. Mune imwe yadzo, kudzivirira kuve nenguva yakaipa mumamiriro ako epamoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » 6 nzira dzekudzora kurasikirwa
Kuisa mari mune yakatarwa mari: imwe nzira kune yako yekuchengetedza